Maitiro Ekugadzirisa Yakashata kana Yakakuvadza Excel Faira
musha Products DataNumen Excel Repair Maitiro Ekugadzirisa Yakashata kana Yakakuvadza Excel Faira
Kana yako Microsoft Excel .xls, .xlw uye .xlsx mafaira akakuvara kana kukanganiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye ukatadza kuvhura zvinobudirira neExcel, unogona kushandisa matanho anotevera kugadzirisa iyo yakashata faira:
Cherechedza: Asati starting nzira yekudzosa data, iwe unofanirwa gadzira backup yefaira rako rekutanga rakaora reExcel. Iyi ndiyo most nhanho yakakosha iyo vazhinji vachakanganwa.
Chekutanga pane zvese, Microsoft Excel ine yakavakirwa-mukati yekugadzirisa basa. Kana ichinge yaona kuti pane huori mufaira rako reExcel, ichaita start Faira Kudzorera mode uye edza kugadzirisa iyo faira iwe. Mune zvimwe zviitiko, kana iyo Faira Kudzorera modhi haisi start otomatiki, ipapo unogona kumanikidza Excel kugadzirisa yako faira nemaoko. Tora Excel 2013 semuenzaniso, matanho acho ndeaya:
Pa faira Menu, baya Open.
MuVhura dialog box, sarudza iyo faira iwe yaunoda kuvhura, uye tinya museve padyo ne Open bhatani.
Click Vhura uye Gadzira, wobva wasarudza nzira yaunoda kushandisa kudzoreredza bhuku rako rebasa.
Sarudza Kugadzirisa sarudzo kana iwe uchida kupora yakawanda data sezvinobvira kubva kune yakashata faira.
If Kugadzirisa haishande, wobva washandisa Bvisa Data kuyedza kutora masero uye mafomula kubva mufaira.
Maitiro ekudzoreredza akasiyana zvishoma neshanduro dzakasiyana dzeExcel.
Zvichienderana neyedu bvunzo, nzira 1 inonyanya kushanda kumakesi kana huwori huchiitika mumuswe wefaira. Asi hazvishande kana huwori hukaitika mumusoro kana pakati pefaira.
Kana nzira 1 ikatadza, kuchine nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa yako Excel faira nemaoko neExcel, kusanganisira kunyora diki VBA macro, unogona kuwana rumwe ruzivo rwakadzama pa https://support.microsoft.com/en-gb/office/repair-a-corrupted-workbook-153a45f4-6cab-44b1-93ca-801ddcd4ea53
Iko kune zvekare emahara maturu kubva kune wechitatu-mapato anogona kuvhura uye kuverenga Microsoft Excel mafaera, semuenzaniso,
OpenOffice pa http://www.openoffice.org. Ichi chinhu chakakurumbira chakavhurwa sosi chirongwa chakagadzirirwa kutsigira Hofisi mafomati mafomati, kusanganisira mafaira eExcel. Iyo software inogona kumhanya pasi peWindows.
LibReOffice pa https://www.libreoffice.org/. Imwe yemahara hofisi suite.
KingSoft Spreadsheets pa https://www.wps.com/. Iyi yemahara Windows chishandiso iyo inogona kuvhura Excel mafaera.
Google Sheets pa https://www.google.com/sheets/about/ unogona zvakare kuvhura Excel faira pamhepo.
Dzimwe nguva kana Excel ikakundikana kuvhura yako faira, zvishandiso izvi zvinogona kukwanisa kuvhura zvinobudirira. Kana zvirizvo, saka mushure mekuvhurwa kwefaira reExcel, unogona kungoichengeta sefaira nyowani rinenge risina kukanganisa.
Kune mafaera eXlsx, iwo ari chaizvo boka remafaira akamanikidzwa mukati Zip faira fomati. Naizvozvo, dzimwe nguva, kana huwori hunongokonzerwa neiyo Zip file, ipapo unogona kushandisa Zip maturusi ekugadzirisa akadai se DataNumen Zip Repair kugadzirisa iyo faira, seinotevera:
Kufunga kuti yakashata Excel faira iri.xlsx, saka unofanirwa kuitumidza kuti a.zip
kushandisa DataNumen Zip Repair kugadzirisa a.zip uye ndikagadzira yakatarwa faira a_fixed.zip.
Dzorerazve a_fixed.zip dzokera ku_fixed.xlsx
Uchishandisa Excel kuvhura a_fixed.xlsx.
Panogona kunge paine dzimwe yambiro kana uchivhura iyo yakagadziriswa faira muExcel, ingorega kuifuratira uye Excel ichaedza kuvhura nekugadzirisa iyo yakagadziriswa faira. Kana iyo faira ikavhurwa zvinobudirira, ipapo unogona kungo chengeta zvirimo mune imwe isina-kukanganisa faira.
Kana nzira dzese dziri pamusoro dzakundikana, saka unofanirwa kushandisa DataNumen Excel Repair kugadzirisa dambudziko. Ichaongorora iyo yakaora faira uye ibudise nyowani isina kukanganisa-faira iwe iwe otomatiki.